कोरोना, जीवन, मृत्यु, महामारी र रुपान्तरण - Jhilko
कोरोना, जीवन, मृत्यु, महामारी र रुपान्तरण
डा.बाबुराम ज्ञवाली / वसन्त पोखरेल
महामारीमा नयाँ विचार पनि विकसित हुन्छन् । वर्तमान समयको कुरा गर्ने हो भने हात मिलाउने युरोपियन संस्कृतिभन्दा हात जोड्ने हाम्रो परम्परागत संस्कृति वैज्ञानिक हो भन्ने पुष्टि भएको छ । यसबाट पुरातनपन्थी, वैज्ञानिक, रुढीवादी आदि सबै शब्दहरुको अर्थलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । महामारीहरुबाट खानपिन र रहन सहन प्रभावित हुने देखिन्छ । चोखो रहनु पर्ने, बार्नु पर्ने, चोखो खानु पर्ने र प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुराहरुलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले कोरोना भाइरसले विश्व नै आतंकित भएको छ । सबै मानिस त्रसित छन् । सबैलाई कसरी जोगिने भन्ने होड चलेको छ । जीवन र मृत्युको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जसलाई हामीले जीवन भन्छौ त्यो अरु केही नभएर जन्म र मृत्युबीचको फैलावट हो । जसको एक किनारा जन्म हो । परम्परागतरुपमा हामीले जन्म आमाको गर्भबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मान्छौं तर चिकित्सा शास्त्रले सालनाल छुट्टिए (पार्चुरिशन) पछिको अवस्थालाई मात्र वास्तविक जन्म भन्दछ । मृत बालक जन्मलाई चिकित्साको भाषामा गतिहीन जन्म (स्टिल बर्थ) भनिन्छ । जसले जन्मलाई चिकित्सा शास्त्रमा अपरिभाषित बनाउँछ ।
वास्तवमा गर्भमा पनि जीवन हुन्छ । जीवन भएकैले गर्भमा वृद्धि हुन्छ, गति हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ । यति मात्र होइन, निश्चित अवधिपछि गर्भको बालकले बाहिर निस्कने निर्णय पनि गर्छ । जीवन जन्मबाट प्रारम्भ हुन्छ । तथा यो दम्पत्तिको प्रजनन क्षमतामा भर पर्छ । महिलाको प्रजननता स्पष्ट परिभाषित छ । प्रथम रजोदर्शनपछि रजनिवृत्तिको अवधिसम्मलाई महिलाको प्रजननता अवधि भनिन्छ । त्यसैल चिकित्सा शास्त्रमा यसलाई पुनरुत्पादन व्यवहार भनिन्छ । पुरुषको पुनरुत्पादन अवधि त्यसरी परिभाषित गर्न सकिदैंन । तथापि त्यसको पनि सीमा हुन्छ । प्रकृतिको दृष्टिकोणले पनि प्रजननता एक विशेष घटना हो । यसको कारणले सम्पूर्ण जीव जगतको अस्तित्व छ ।
मानिस जन्मेको एक वर्षपछि गन्ती सुरु हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने जन्मदा मानिसको आयु शून्य हुन्छ । जन्मको आयुलाई शून्य मानेर विचार गरौं । शून्यभन्दा पहिले र पछिको संख्यालाई गणितमा धनात्मक र ऋणात्मक संख्या भनेर विभाजन गरिन्छ । शून्यपछिको संख्या धनात्मक एक, दुई, तीन हुँदै बढ्छ भने शून्यभन्दा पहिलेको संख्या ऋणात्मक एक दुई तीन हुँदै घट्छ । गणितको दृष्टिले यदि शून्यपछिको अवस्था धनात्मक जीवन हो भने शून्यभन्दा अघिको अवस्था ऋणात्मक जीवन । तर पनि हामीले त्यसलाई जीवनको विपरीत भन्न सक्दैनौं । सम्भवतः यसैलाई धर्मशास्त्रमा पूर्वजन्महरुको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले धर्मशास्त्रमा वर्तमानमा देखिने जीवनलाई सम्पूर्ण जीवनको एक सानो अंश मान्दछ ।
जीवनको अर्को किनारा हो मृत्यु । जीवनका सबै प्रमाण स्थायी रूपले विलीन हुने अवस्थालाई मृत्यु भन्ने गरिन्छ । जन्मदेखि जीवन शुरु हुन्छ भने मृत्युमा समाप्त हुन्छ । अर्थात् आमाको गर्भमा जीवन सुरु हुन्छ भने कात्रो ओढिनु जीवनको अन्त हो । जीवनका दुई किनारा भए पनि यी दुवै विल्कुलै फरक छन् । जन्म स्वैच्छिक छ तर मृत्यु अनिवार्य छ । मृत्यु हुनको लागि जीवित जन्म हुनै पर्छ । भ्रूणमा मरेर जन्मेको वा गतिहीन जन्मलाई मृत्यु भनिदैंन । जन्म भन्ने कुरा सामाजिक, पारिवारिक र दाम्पत्य व्यवहारमा भर पर्छ भने मृत्यु वास्तवमा नै व्यक्तिगत घटना हो । मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक कारणले प्रभावित हुन्छ । तर मृत्यु अनैच्छिक हो । मृत्यु अनिवार्य हो । त्यसैले मृत्युलाई सत्य भनिन्छ । मानिस जन्म लिंदा सत्य हो भनिदैंन तर मर्दा सत्य हो भनिन्छ ।
एक पूरै प्रक्रियाका दुई किनार भए पनि जन्मदर र मृत्यु दरमा अन्तर हुन्छ । जन्म दरलाई प्रयास गरेर शून्य बनाउन सकिएला तर कुनै मृत्यु दर कहिल्यै शून्य हुन सक्दैन । जन्म लिएको मानिसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ । मृत्युदर शून्य हुनका लागि जन्मेको मानिस कहिल्यै नमर्नु पर्यो । मृत्यु एक यस्तो सत्य हो जसको बारेमा बोल्न मानिस डराउँछन् । ओशोले आफ्नो एक प्रवचनमा भनेका थिए एकदशक पछि सेक्स निषेधित शब्द (ट्याबु) रहने छैन । तर मृत्यु भविष्यमा एक ट्याबु शब्दको रुपमा उदाउने छ । उनले जुन बेला यो कुरा गरेका थिए त्यस बेला सेक्स शब्द पनि सार्वजनिक रुपमा सम्मानित थिएन । मानव समाजको जीजीविषा नै त्यो कारण हो जसले गर्दा मृत्यु एक निषेधित शब्द बन्न जानेछ ।
तर मृत्यु पनि जन्मजस्तै अपरिभाषित रहिआएको छ । हामीले सुन्छौं कति मानिस मरिसक्यो भनेर घाट लिएर गएका फेरि जीवित भएर फर्के । त्यसका पछाडि आआफ्नै तर्क गर्न सकिएला तर स्वयं चिकित्साशास्त्रले मृत्युलाई स्पष्ट परिभाषित गर्दैन । के भएमा मृत्यु मान्ने भन्ने कुराका अनेकौं तर्क छन् । परम्परागत तर्कमा श्वास प्रश्वास, मुटुको धड्कन, शरीरको तापक्रम जस्ता कुराहरु छन् । श्वास चल्न छोडेपछि मृत्यु । तर श्वास बन्द भएकाहरुलाई तत्काल कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिएर फेरि वर्षौं बाँचेका उदाहरण पाइन्छन् । मुटुको धड्कन बन्द भएपछि चिकित्सकले मृत्यु भएको घोषणा गर्न सक्छन् । तर योगासनको अभ्यास गर्नेहरुले केही बेर मुटुको धड्कन रोक्न सकेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । मैले स्वयं पनि आधा मिनेट मुटुको धड्कन रोकेको मानिसले सार्वजनिक प्रदर्शन गरेको देखेको छु । यदि तापक्रमलाई मृत्युको आधार मान्ने हो भने मृत्युको केही बेरसम्म शरीर तातै रहन्छ । मानिसको शरीर पूरै चिसो हुन दुई तीन घण्टा लाग्न सक्छ । मानिस मरेपछि मृत्युको सम्पूर्ण प्रक्रिया विस्तारै फैलिँदै जान्छ । मानिस मर्यो भनेपछि पनि सबै कोष एकैपटक मर्दैनन् । तिनीहरुले आफ्नो काम गर्दै रहन्छन् । त्यसैले मरेपछि पनि आँखा काम लाग्छ भनेर निकाल्ने काम हुन्छ । यसको अर्थ हो आँखा केही समय जीवित रहन्छ ।
चिहानमा गाडेका मानिसका नङ र कपाल बढेको पाइएका छन् । मानिसका शरीरमा ब्याक्ट्रिया हुन्छन् जुन दुई हप्तासम्म जीवित रहन्छन् । ती ब्याक्ट्रेरिया मानव शरीरका एक भागको रुपमा शरीरमा रहन्छन् । यसरी सम्पूर्ण मृत्यु हुन धेरै समय लाग्छ । यसै कुरालाई गरुड पुराणमा संकेतमा बताइएको छ । यदि सूक्ष्म शरीरका कुरा गर्ने हो भने त्यो अझै केही समय रहन्छ । कुनै मानिसका कृत्य पनि उसको जीवन हो । जुन दिनसम्म हामीले उसका कुरा गर्छौं तबसम्म त्यो सूक्ष्म रुपमा जीवित छ । अकबरले बीरबललाई सोध्यो– बीरबल मानिसहरुले फलानो स्वर्गे भो भन्छन् । के मानिस साँच्चै स्वर्ग जान्छ ? बीरबलले भन्यो– त्यो स्वर्ग गयो कि गएन, त्यो जान्न सकिन्छ सरकार ।
अकबरले सोध्यो– कसरी ?
बीरबरलले भन्यो– सरकार जुन मानिस मरेपछि मानिसहरु उसको पीर गर्छन् । उसलाई सम्झिरहन्छन् तिनीहरु स्वर्ग जान्छन् ।
निश्चित रुपमा यही मानिसको सूक्ष्म जीवन हो । सूक्ष्म जीवनको अर्थ हो कुनै मानिसले आफू जीवित रहँदा संसारमा जुन तरंग उत्पन्न गरेको छ त्यसको आभास ।
आहार, निद्रा, भय, र सन्तानोत्पत्तिको कुरामा अरु प्राणी र मानिसमा कुनै अन्तर छैन । तर मानिसमा जुन ज्ञान र चेतना छ केवल यसले गर्दा मानिस अन्य प्राणीभन्दा फरक हुन पुगेको हो । अन्य प्राणीको तुलनामा मानव समाज बढी सुरक्षित रहन चाहन्छ । सुरक्षाको चाहना नै भयको उत्पत्तिको कारण हो ।
भयका अनेक कारण हुन सक्छन् तर मृत्यु भय सर्वोच्च भय मानिन्छ । भयलाई व्यक्तिगत, सामुदायिक, वैश्विक अनेक रुपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । भोज र मोजमा रमाउनेलाई शारीरिक रोगको भय हुन्छ । धनी व्यक्तिलाई शासकको भय हुन्छ । वलवानलाई शत्रुको भय हुन्छ जसले उसको शक्ति क्षीण गराइदिन्छन् । पढे लेखेकालाई शास्त्रार्थको भय हुन्छ । गुणी मानिसलाई दुष्टसँग भय हुन्छ । अनि मानिस भएपछि मृत्युसँग भय हुन्छ । आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नु यस भयबाट मुक्तिको चाहना नै हो । त्यसैलाई अध्यात्मको भाषामा मोक्ष भनिन्छ ।
मृत्युको सम्बन्धमा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो मानिसको स्वास्थ्यमा भर पर्छ । त्यसैले अस्वस्थता मृत्युको कारण हो । मानिसको स्वास्थ्य उसको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो तर सँगसँगै दायित्त्व पनि हो । यदि यसलाई निरन्तर बचाउने प्रयत्न नगर्ने हो भने यो रहदैंन । लापरवाही गर्नासाथ त्यसैलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व मानिसको आफै हो । मानिसको स्वास्थ्यको भयमा कुपोषण, रोग र अनिकाल नै हुन् ।
प्राकृतिक र मानवीय दुर्घटना पनि मृत्युका कारण हुन् । धेरै मानिसको मृत्युका घटना हुँदा अर्थशास्त्री माल्थसको संझना हुन्छ । जसले मानव समाजलाई यी घटनाबाट बच्न निदानात्मक उपाय गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । मृत्युका कारक सबै भयकारक छन् । भुईंचालो र भोकमरीले केवल उसैको मृत्यु हुन्छ जो त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । यो प्रभाव अन्यत्र फैलिदंैन तर प्लेग, हैजा, औलो, ओठे आदि महामारी रोगहरुले प्रथम पटक मानिसलाई जुन प्रभाव पार्छ त्यसको गुणक प्रभाव हुन्छ । प्रभावितहरुमध्ये कैयौंको मृत्यु हुन्छ, केही जीवित पनि रहन्छन् तर जीवित वा मृत सबैले आफ्नो रोग अन्यलाई सारिदिन्छन् । त्यसैले महामारी भुईंचालोभन्दा अझ डरलाग्दो हुन्छ । तर महामारीले मानव समाजलाई अवसर पनि प्रदान गर्छ । महामारीको घटनापछि संसारको इतिहासले मोड लिने गरेको छ । नयाँ आविष्कार भएका छन् । नयाँ औषधि आएका छन् । नेपालको तराई क्षेत्र औलोका लागि कुख्यात थियो । यस औलो रोगका कारण पहाडी क्षेत्रबाट मानिस तराईमा आउन डराउँथे । त्यसैले प्राचीनकालको बसाइ सराइ ज्यादै कम थियो । भनिन्छ, नेपालको पहिलो रेल वे (रक्सौल देखि अमलेखगंज) को स्थापना राणा शासकहरुले औलोको भयले बच्न निर्माण गरेका हुन् । कलकत्ता र बनारस बसाइपछि नेपाल फर्कंदा औलोको क्षेत्रबाट जति सक्यो छिटो पार हुने उद्देश्यले त्यो रेल वे निर्माण भयो । तथापि विकासका लागि एक उपलब्धि त्यो बन्यो । औलोको औषधि बन्यो र सं रा सं. को सहयोगले नेपालले औलो उन्मूलनमा एक उपलब्धि प्राप्त गर्यो । औलोको औषधि बनाउने चिकित्सक रोनाल्ड रौसलाई यस योगदानको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो तर उनको बारेमा बहुतै कम जानकारी उपलब्ध छ । उनकी आमा ब्रिटिश थिइन् । के थाहा छ भने उनले गोर्खा राइफल्समा काम गर्ने मामुली सिपाहीसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । उनको सन्तान हो रौस । त्यस प्रेमी र उसका सन्तानको बारेमा तथ्यपूर्ण जानकारीको अभाव छ । के थाहा त्यस चिकित्सकको मूल नेपालमा छ कि ? किनभने उनले जुन रोगको उपचार खोजे त्यसको सबभन्दा बढी प्रकोप नेपालमा थियो भन्न सकिन्छ ।
महामारीमा नयाँ विचार पनि विकसित हुन्छन् । वर्तमान समयको कुरा गर्ने हो भने हात मिलाउने युरोपियन संस्कृतिभन्दा हात जोड्ने हाम्रो परम्परागत संस्कृति वैज्ञानिक हो भन्ने पुष्टि भएको छ । यसबाट पुरातनपन्थी, वैज्ञानिक, रुढीवादी आदि सबै शब्दहरुको अर्थलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । महामारीहरुबाट खानपिन र रहन सहन प्रभावित हुने देखिन्छ । चोखो रहनु पर्ने, बार्नु पर्ने, चोखो खानु पर्ने र प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुराहरुलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । यी सबै कुराहरुमा आएका परिवर्तनले भावी उत्पादन व्यवस्थामा दीर्घकालिक रुपान्तरण हुने निश्चित छ । २५ चैत्र २०७६
कक्षा ११ र १२ को परीक्षाबारे आज निर्णय हुने
‘लेबर पार्टीका नेताको जुत्ताको तुना बाँध्ने धेरै’